बिचित्र संसार – Page7– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० आश्विन २०७७, शनिबार १७:४९ English
मेरिनाकी छोरीले ब्वाइफ्रेण्ड नबनाएपछि… – सरिता अर्याल ६ आश्विन २०६९, शनिबार २०:०७
बुलबुलका लागि प्रेमदिवसको सम्झना . . .-सुमी प्रकृति ५ आश्विन २०६९, शुक्रबार २०:२१
प्रिय प्रेम, मैले फेरी तिमीलाई सम्झिए दिलैदेखि सम्झिए । फेरी बसन्त ऋतु आयो,पालुवाहरु पलाउन थाले ,फूलमा कोपिला लाग्न थाले,कति फक्रन थाले पछ्याउदै प्रेम दिबस आयो ,मैले तिमीलाई सम्झिए,बेस्सरी सम्झिए । थाह छ प्रेम जबजब बसन्त ऋतु प्रेम दिबस लिएर भित्रिन्थ्यो मन एकतमासको हुन्थ्यो तिम्रै..
जिन्दगीका कांचुलीहरू – सरिता अर्याल २ आश्विन २०६९, मंगलवार १९:५४
कुरा ०४५ साल माघ महिनाको हो । इलाम घुम्ने र आफन्तहरूसित पनि भेटघाट गर्ने भन्ने चाहनाले म इलामको सुम्बेकतिर पुगेकी थिएं । म त्यहां पुगेको बेलामा गाउंमै एउटा विषयले चर्चा पाएको थियो । स्थानीय बासिन्दा भोला सुवेदीकी अपाङ्ग दिदी त मरिछिन् । मानिस जन्मेपछि मर्नुपर्छ, त्यसमाथि एक अपाङ्ग..
प्रेम पत्र – “सम्भब भएन यो समयमा त” – पूर्ण ‘कान्छा’ गुरुङ ७ भाद्र २०६९, बिहीबार १७:१४
सम्भब भएन यो समयमा त मनको कुरा राख्नलाई भेटेर तिमीलाई प्रपोज गर्न पुगेछु सबै कुराहरु पत्रमा लेखेर खै किन हो आज भोली अनगिन्ति सपनाहरु देख्न थालेको छु, यो जिन्दगीमा खुसी खुसीको रंग भर्ने धेरै आशाहरु पालेको छु, समयको चक्रसगै भौतिक सरीर दुर भएता पनि, हुँदैछ यो तन मन त्यो मनको मझेरीमा।..
फेसबुकमा फत्तेमाया -युवराज नयाँघरे ७ भाद्र २०६९, बिहीबार १७:०६
हराएका मान्छे भेटिए भटाभट हो, थुप्रै मान्छेहरू हराएका थिए । हृदय र शरीरहरू हराउने करम बढिरहेथयो । हिजोआज ती भेटतै छु विस्तारै-विस्तारै । सूचनाको जालोले नबेरएिको घर रहेन । खबरको अँगालोबाट अलगगिएको पिँढी अछुतो रहेन । अनि घर र पिँढीबाट डोरएिर पुगेका परेलीले मौनतामा बाँधने कुरै भएन..
“अन्जानमै बसेको माया “ -निशा खनाल अर्याल २० श्रावण २०६९, शनिबार १९:२३
तिम्रो त्यो असिम मायाले मलाई किन हो कुनी ,हरेक क्षण तिमीलाई सम्झन बाध्य गराउछ ,हेर्छु यता उता आखाश खसे झैँ लाग्छ , धर्ति फाटेर चिरिए झैँ… ! शुन्य गगनमा मेरो यी तरंगित ढुक ढुकीलाइ सम्लादै अतितका तस्बिरहरूलाई आशुका थोपा थोपाले पखाल्दै म… ! त्यै पनि हाम्रो प्रेमलाई एक पौराणिक कालको जस्तै..
“अनलाईन प्रेम” -बिना तामाङ “सुनगाभा” २ श्रावण २०६९, मंगलवार ०१:३८
घडिको सुई भित्तामा कहिले चढ्दै त कहिले ओर्लदै थियो।शुन्यतामा टिक् टिक् आवाज काफी थियो मुटुको धड्कन अझ तेज बनाउन। यस्तै ९ बजेको हुदोँ हो।एक्लै धुम्धुम्ती कोठामा बसिरहेकी मलाई नजिकैको स्योकेशमा राखिएको किताबका खातहरुले टोकुलाँ झै हेर्दै थियो। सुरज गएदेखि मेरो एकान्तको साथी बनेका..
“सम्बन्ध” -सुमन घिमिरे २६ असार २०६९, मंगलवार ०३:३१
निशान्त नितान्त एक्लो छ आज । गाडीमा नारायणगोपालका गीतहरुलाई सिडी प्लेयरमा हाल्दै र त्यही गीत गुनगुनाउँदै गाडीको पाँग्रासँगै एक्लो जीवनलाई गुडाइरहेको छ । सुखद जीवनको कल्पना सायद सच्चा प्रेमले गर्दो हो तर उसका लागि यी सबै दन्त्यकथाका किँवदन्तीहरु जस्तो भएका छन् । मन पराइनु, मन..
२२ असार २०६९, शुक्रबार १२:०७
ड्रग्सले बगाएको आंसु र मिडियाको भूमिका वसन्तराज कुंवर एउटी आमा विदेशमा भएको श्रीमान्लाई छोडी नेपालमा बसेर छोरालाई प्लस टू पास गराउन सक्रिय रहिन् । ती आमाको धुन भनेको केवल प्लस टू पास गराई बाबु बसेकै देशमा छोरा लिएर जाने मात्रै नै थियो । उनले आफ्नोतर्फबाट दिनुपर्ने सल्लाह, माया,..
मलाई मेरो कृष्णको औधी आवश्यकता छ -लक्ष्मी शर्मा ११ असार २०६९, सोमबार २०:५३
समय बित्दै गयो । म पनि व्यवहारको बोझमा थिचिएकी थिएँ । बिस्तारै भाइ, बहिनीले पनि आफ्नो-आफ्नो पढाइ पूरा गरे । भाइ-बहिनीले पनि मलाई दिज्यू हजुरले विवाह गर्नुस् भन्ने गर्थे । आमाबाबा दुवैको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएकोले घर चलाउँदै र बाबाको कार्य व्यवहार हेर्दै समयले नेटो काटिसकेछ । मैले..
“मेरी स्वास्नी र त्यो मान्छे” -सञ्जय बिष्ट ११ असार २०६९, सोमबार २०:३२
आएकै बाटो गएर सधैँ त होइन तर प्राय: जसो देवेन्द्र घर पस्थ्यो। प्राय: जसो यसकारण कि एउटै बाटो हिँड़िरहँदा दिक्क मानेको मनले कुनै-कुनै दिन उसलाई घुमेको अर्कै बाटो घुमाएर घर पुर्याउथ्यो। यस्तो कुनै-कुनै दिन छाड़ेर माथि भनिएकै प्राय: जसो ऊ त्यही बाटो हिँड़्थ्यो। ‘त्यस’-को नाम जान्दैन..
“अन्तिम् भेट” -जगतराम बर्देवा “घायल” ११ असार २०६९, सोमबार २०:२७
२०६१ साल असार महिनाको ४ गते दिन् थियो । नेपाली समय अनुसार घडीको सुइ सूस्त सूस्त गतिमा सर्दै थियो मानौ ११ वज्ने तर्खरमा .. काठमाण्डौ वाट झापाको गौरीगंज सम्म जानको लागि यात्रु लिएर आएको तिलंगा यातायात सेवाको ना। २ख ७६८१ नक्वरको वस् हेटौडा वजारको शिववुवा आयलस्टनस्रमा आएर रोकीयो । मेरो..
म दोस्रो विवाह गर्न चाहन्छु -सरिता अर्याल १३ जेष्ठ २०६९, शनिबार १८:५१
म निजी विद्यालयमा शिक्षिका थिएँ। श्रीमान् पनि एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो। हामी दुई हाम्रा दुई, सानो सुखी परिवार। काठमाडौंमा एउटा पुस्तैनी घर थियो। हाम्रो भागमा बस्नलाई तीन कोठा। हामीलाई पर्याप्त थियो। घरभाडा तिर्नु नपर्ने भएकाले दुई बूढाबूढीको कमाइ हाम्रा लागि..
एउटा प्रेमकथा “निमेषको कथा” -सुबिन भट्टराई २२ बैशाख २०६९, शुक्रबार २०:१९
निमेष अग्लो गोरो र खाइलाग्दो व्यक्तित्व भएको प्रभावशाली व्यक्ति थियो । उसको यस किसिमको व्यक्तित्वलाई उसको खानदानी रहनसहन, खानपान र चिकित्सकीय स्वास्थ्य सचेतताको परिणतिका रुपमा मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो । कपाल सिल्की थियो । उसको कपालले उसको निधारको आधा भाग जहिले पनि छोपिरहेको..
उनको अब्यक्त प्रेम र म (भाग -एक) – सुमन लुइटेल ३ बैशाख २०६९, आईतवार १९:३३
औसत नेपाली केटीहरुको उचाई, मिलेको जिउडाल र लोभलाग्दो हाँसो यस्तै यस्तै केहि देखिने गुण । सायद त्यसैले होला साथीहरुले दिक्षालाई कक्षाका राम्री केटीमध्येमा गन्थे । कक्षामा करिव ७ दर्जन विद्यार्थी थिए जसमा केटीहरुको संख्या मुस्किलले एक दर्जन । पढाईकै क्रममा उ मेरो नजिककी साथी भई ।..
प्रेम र जीवन..-रत्ना डीबू मगर २५ चैत्र २०६८, शनिबार २१:३५
रत्नाले आकस्मात कम्प्युटरको 'स्वीच अफ' गरिदि ई । फरक्क फर्कि ई अनि आफ्नो ओछ्यानमा गएर गम्लंग घोप्टि ई । घुँक्क घुँक्क गर्न थाली । साँच्चै रुन थाली । आँशुको खोलो बगिरहेको थियो । घोप्टो परेर रोएकी ले आँशु नाकको डांडी हुँदै ओछ्यानमा खस्दै थियो । केही मुखतिर पस्दै थियो भने केही चिउँडो..